"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : Play Store ရှိပြီးသုံးမရဖြစ်နေသော ဖုန်းများ ဒီနည်းလေးကို စမ်းကြည့်ကြပါ
ဒီပုံထဲက Download ထဲမှာ Play Store ကိုတွေ့ နေရပေမဲ့ သင့်ဖုန်းမှာတော့ တွေရမှာ မထင်ဘူး ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ သင့် ဖုန်းထဲက Play Store ဟာသုံးလို့ မရဖြစ်နေလို့ ပါ။
ဒီတော့ ဒီပုံထဲ မှာ သင်တွေ့ ရတာက Apps ထဲမှာ Download ယူထားတဲ့ APK များကို ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီ Download နေရာကနေ Running နေရာဘက် ကိုရွှေ့ သွားပါ ပြီးရင် All ဘက်ကိုထပ်သွား ပါ All ထဲ ကိုရောက်ရင် အောက်မှာ မြင်ရတဲ့ ပုံထဲကလို Play Store ကိုရောက်အောင် အောက်ကိုဆင်းသွားပါ တွေ့ ရင် ပုံပေါ်မှာ ဖိပြီးဖွင့် လိုက်ပါ။
သင် ဖွင့် ပြီးသွားရင် အောက်ကပုံ လိုတွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီပုံက နမူနာပြပေးထားတဲ့ ကျနော့ ဖုန်းထဲကပုံ ပါ သင့်ဖုန်းနဲ့အနည်းငယ် မတူတာတွေ့ ရပါမယ်။
ဒီ ပုံက Play Store သုံးလို့ ရနေတဲ့ ပုံပါ သင့် ဖုန်းထဲမှာ တော့ Enable ဆိုတဲ့နေရာ ကိုတွေ့ ရမယ်ဖြစ် ပါတယ် အဲဒီ Enable ကို လက်နဲ့ ထောက်ဖိ ပြီး ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် သင့် ဖုန်းရဲ့ Play Store ဟာပြန်သုံးလို့ ရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1} လိုလိုမယ်မယ် အောက်မှာ Video လေးထဲထားပေးပါတယ် ကြည့်ကြပါအုန်း။
2} နောက်ထပ် နည်းတစ်ခုကိုလည်း ထပ်ထဲ့ ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်ပါ Video ကိုကြည့်ပြီး လုပ်ကြပါ။
3} သူငယ်ချင်းတစ် ယောက်က Viber မှာ အထက်က နည်းတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ ထပ်တင်ပေးတာပါ အားလုံး လုပ်ဆောင်ကြည့်ရန် နည်း ၇ ခုပါဝင်ပါတယ် အဆင်ပြောကြပါစေဗျာ။ လူတွေကို အဆင်ပြေစေချင်တဲ့ စေတနာ သက်သက်ပါ။
1. Cache တွေကိုရှင်းထုပ်နည်း
ကွန်ပျူ တာကို သုံးရင်း နှေးလာလို့ ဒီ Cache တွေကို ရှင်းနည်းကို ကွန်ပျူ တာမှာရေးပေးပြီးပါ ပြီ ခု ဖုန်းတွေအတွက် လိုအပ်လာလို့ ပြပေးတာပါ။ ဒီအတွက် Play Store ထဲမှာရှိနေတဲ့ Cache တွေကို ရှင်းထုပ်ပြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ သင့် ဖုန်းထဲက Setting ကိုအရင်ဝင်ပါ ပြီးရင် Apps သို့ မဟုပ် တစ်ချို့ ဖုန်းတွေမှာ Application Manager ထဲကိုဝင်ပါ။ အပေါ်မှာ ပြထားပေးတဲ့ ပုံတွေလိုပါဘဲ Download ကိုစမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင် ဘေးဘက်ကို တွန်းပြီး ဟိုးနောက်ဆုံး " All " ကိုရောက်တဲ့ အထိသွားပါ။ ရောက်ပြီဆိုရင် Google Play Store ကိုရှာပါ အောက်ကပုံမှာ ပြထားပါတယ်။ ပထမ ပုံက Google Play Store ကိုတွေ့ ပြီဆိုရင် အထဲကို ဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင် ဒုတိယ ပုံမှာ မျှားအနီနဲ့ ပြထားပေးတဲ့ Clear Cache ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ၊ ပြီးရင် Google Play Store ကိုသွားဖွင့် ကြည့်ပါ ပြန်ကောင်းနေတာတွေ့ နိုင်ပါတယ်၊ ဒါက ပထမ နည်းပါ ဒီနည်းနဲ့အဆင်မပြေလို့စိတ်မပျက်ပါနဲ့အောက်မှာ နည်းတွေ ရှိပါသေးတယ်။
မျှားအနီရောင်နဲ့Clear Cache ကိုမြင်အောင်ပြထားပေးပါတယ်။
2. Data များကို ဖျက်ပြစ်နည်း
အထက်မှာ ပြပေးထားတဲ့ နည်းနဲ့ မရ ဘူးဆိုရင် Play Store ရဲ့ Data တွေကို ဖျက်ပြစ်ဖို့ လိုပါတယ် ဒီနည်းက တော့ အထက်မှ ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ Clear Cache ရဲ့ အထက်နားမှာ Clear Data ဆိုတဲ့ Button ရှိပါတယ် ဒီ Clear Data ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ဒါ ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Play Store အလုပ် ပြန်လုပ်နေလောက်ပြီထင်ပါတယ်၊ မကယ်၍ အလုပ် ပြန်အလုပ်သေးရင်တော့ အောက်ကနည်း နဲ့ ထပ်ကြိုးစားပါ။
3. Play Store updates လုပ်ထားတာကို ပြန်ပြီး Uninstall လုပ်ပေးပါ။
ဒီနည်းကလဲ ပထမ လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အချက်တွေက အတူတူပါဘဲ နည်း အမှတ် 1 နဲ့2 ကလိုပါဘဲ ပြီးရင် Uninstall And Update Button ကိုရှာပါ ပြီးရင် သူ့ ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ သူ့ အလိုလို Google Play Store ရဲ့ မူရင်း Version ကိုပြန်ဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မရသေးရင် အောက်က နည်းကို ထပ်သုံးပါ။
4. Google Play Services ထဲက Cache များကိုရှင်းနည်း
ဒီနည်းကတော့ All ထဲမှာရှိတဲ့ Google Play Store ရဲ့ အထက်က App ဖြစ်တဲ့ Google Play Services ထဲကိုအရင်ဝင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် အပေါ်က ပထမပုံကိုကြည့်ပါ ပြီးမှ ဘေးကပုံထဲက Clear Cache ကိုရှင်းလိုက်ပါ။ အဆင်မပြေသေးလဲ စိတ်မပျက် ပါနဲ့နောက်ထပ်နှစ်နည်းကျန်ပါသေးတယ်။
5. Download Manager ကို Activate လုပ်ပေးခြင်း
ဒီနည်း ကလည်း Setting ထဲကနေဝင်လာပြီး Apps သို့ မဟုပ် Application Manager ထဲကနေပြီး All အထိရောက်အောင်လာပြီး All ထဲမှာရှိတဲ့ Android Icon လေးနဲ့ ပြထားပေးတဲ့ App လေးဖြစ်ပါတယ် အောက်ကပုံ နှစ်ပုံကိုကြည့်ပါ ပထမ ပုံက All ထဲမှာရှိနေတဲ့ Download Manager ကိုရှာပြပေးထားတာပါ ဒုတိယပုံက တော့ Download Manager ကအလုပ် လုပ်နေလို့ Disable ခလုပ်နေရာလေးမှာ မှိန်နေတာဖြစ်ပါတယ် အကယ်၍ အဲဒီ Disable လေးကို နှိပ်ကြည့်လို့ ရပါက နှိပ်လိုက်ရင် Enable လို့ ပြောင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် အခု Active ဖြစ်နေလို့လုပ်စရာမလိုပါဘူး သင့် ဖုန်းမှာ Active ဖြစ်မနေပါက Disable ကို နှိပ်ပြီး Enable ပြောင်းခြင်းဖြင့် Active လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
6. Google account အကောင့်ကိုဖျက်ထုပ်ပြီးမှ ပြန်ထဲ့ခြင်း
Google Account ကိုဖျက်ပြစ်ပြီးမှ ပြန်ထဲ့တဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီနည်းကတော့ ဖုန်းတွေမတူရင် လုပ်ဆောင်ရတာမတူလို့ရှင်းပြနေလဲ သိပ်တော့ မထူးလှပါဘူး ဒီနေရာမှာ အထက်က ပုံတွေကို ကြည့်ပြီးလုပ်မယ် ဆိုရင်လဲ လုပ်လို့ ရပါတယ် Google Account ကိုဖျက်ရမှာ ပြီးတော့မှ အသစ်ပြန်ထဲ့မှာ ဆိုတော့ ဖုန်းကို Reset ချ လိုက်ရင်လဲ အကောင့်ပြန်ဖွင့်ရတာဆိုတော့ အောက်ကနည်းကို သုံးခြင်းက ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောင့်ဖျက်လို့ တဲ့ ဖုန်းများအတွက်တော့ ဖျက်လိုရရင် အကောင့်ပြန်ထဲ့ဖို့ တော့ ရေးပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါကလဲ လွယ်လွယ်လေးပါ Settings > Accounts > Add Account > Google ကိုသွားပြီး ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
7. Factory Data Reset လုပ်ပေးခြင်း
ဒီနည်းလေးကတော့ Smart Phone ကိုင်ဆောင်ထားသူတိုင်း Play Store ပြဿ နာ အပြင် အခြားအကြောင်းတွေကြောင့် Reset ချ ဖို့ လိုအပ်လာရင် လုပ်ရအောင်လူတိုင်းသိထားသင့်တာလေးပါ။ သိတဲ့ သူများအတွက် လွယ်လွန်းလို ပြောတောင် မပြောချင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ မသိသေးသူများအတွက် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်အဆင့်ကိုဘဲ လုပ်လုပ် Setting ထဲတော့ဝင်ရတာကြီးပါ အောက်မှာလဲ ပုံနဲ့ ပြပေးထားတော့ ပိုတောင်လွယ်ပါသေးတယ်၊ Setting ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီး Back Up And Reset ကိုရအောင်ရှာပါ တွေ့ ရင် နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ။ အောက်က နှစ်ပုံထဲက ပထမ ပုံက Backup and Reset ကိုပြပေးထားပါတယ် ဒုတိယ ပုံက Backup and Reset ထဲကိုဝင်ပြီးရင် တွေ့ ရမဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်၊ Back Up my Data မှာအမှန်ချစ်လေး ပေးပြီး Factory Data Reset ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါဘဲ အနီရောင် မျှားတွေနဲ့ ပြထားပေးပါတယ်။ Factory Data Reset ကိုနှိပ်ပြီးရင် တော့ သူအလုပ် လုပ်နေတဲ့ အချိန်ကို စောင့်ပါ မလောပါနဲ့ဖုန်း ဟာ သူ့ အလိုလို ပါဝါ ပြန်ဝင်လာပြီး အားလုံး အခြေနေ ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီးရင် တောင် ခဏ စောင့်ပါ၊ ပြီးမှ Play Store ထဲကိုဝင် ပြီး G-mail account ကို အသစ်ပြန်ဖွင့်ခြင်းဖြင့် သင့် Play Store ဟာ ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မျှားပြထားတဲ့ နေရာကို နှိပ်ပေးပါ
ကဲ ၇ နည်းတော့ ပြောပြီးသွား ပြီ သင့် Play Store ပြန်မကောင်းသေးဘူး လား မကောင်းသေးရင် ပြောနော် နောက်တစ်နည်း ကျန်သေးတယ်။ ဒါကတော့ နောက်ဆုံးနည်းပါ ဝှက်ဖဲ ဆိုပါတော့ ဒီနည်းကတော့ သင် ဝယ်လာတဲ့ ဆိုင် သို့ မဟုပ် Factory Rom ပြန်ထဲ့ ပေးနိုင်တဲ့ ဆိုင် တစ်ဆိုင် ဆိုင် ကိုသွားပြီး Factory Rom ကို အခကြေးငွေ ပေး ပြီးထဲ ခိုင်းလိုက်ပါ၊ သင့်ဖုန်း အာမခံ မကုန်သေးရင် ဆိုင်တွေက အလကား လုပ်ပေးရပါတယ်။ ဒီ နောက်ဆုံး နည်းကို ဖတ်ပြီး ရယ်မောနိုင် ကြပါစေ။
မြန်မာတို့ အတွက် ဗဟုသုတ မျှ ဝေခြင်းပါ
Posted by Than Minn Naing at 3:33 PM